Izithako loMgangatho, Izongezo kunye Izongezelelo
• umngundo inhibitor
Ulusu & Umbala Shell
Care Skin Basic
I-Chelated Micro Nutrient
Water Soluble umanyolo
Yenzululwazi kunye neReagent
Ubomi kunye neNzululwazi yeNzululwazi
Izixhobo zovavanyo kunye nokuSetyenziswa
Isixhobo sovavanyo olukhawulezayo
ZAMA & TRUST
Sifuna arhente ehlabathini lonke. Ezinomdla? Nceda e-mail: sales@puyerinternationalgroup.com
Ngohambo lwethu OOMASIFUNDISANE NEZAKHIWO
Kule minyaka ilishumi idlulileyo yophuhliso kunye nokuhlola, iqela lePuyer liqokelele amava atyebileyo okuhlangabezana nesicelo sentengiso sehlabathi senzuzo ephezulu kunye neemveliso zetekhnoloji entsha.
Iimveliso zeenkampani zePuyer zanamhlanje zigubungela ii-Biochemicals, iibhloko, iiReagents, izixhobo, izinto ezisetyenziswayo, uKhathalelo lwaBantu, ubuhle bezithambiso, ukondla kwezilwanyana, ukukhula kwezityalo kunye ne-aquaculture. Iinjongo zethu zeshishini zezi: Ukusebenza kakuhle, ukuYila kunye nokuPhumelela.
amashishini Iqela lethu ziquka utyalo-mali, imveliso, urhwebo kunye nolawulo supply chain. Thina ezinezibonelelo imveliso kunye ofisi kwiindawo ezininzi zehlabathi, kuquka FTAs, ukulungiselela ukunikezelwa ngexesha uzise ixabiso oluzinzileyo kubathengi bethu.
Kholelwa ukhetho lwakho ☺
Umthengi unikezela ngowona mgangatho uphezulu, uyahlangabezana neemfuno zentengiso yamanye amazwe kwaye ahambise zonke iimpahla ngexesha. Ukuthengisa iilwimi ezininzi kunye neqela lethu lenkxaso linokunceda kwiimfuno zenkampani yakho.
Vitamin B12 (iMecobalamin)
I-Dicalcium Phosphate 18% yePowder Granular feed Grade
Super izifunxi Polymer (SAP)
Ubisi Thistle Silymarin
Acid Acid 50% Powder Organic
Intlanzi yeCollagen Ⅱ
Funda Izinto More
Sizamela ukunika abathengi kunye neemveliso ezisemgangathweni Cela iinkcukacha, Sample & Quote, Qhagamshelana us!
uluhlu Enquiry For Price
Puyer Group © 2019 Onke amalungelo agciniwe
IBeta-Carotene, BLOCHEMICALS, enzyme, Vitamin C Camera , yemichiza, Yenzululwazi kunye neReagent,
+ 852 5488 6726
+8615507515690 (7 * 24 iiyure)